नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको घोषणा, ६ बुंदे सहमति - Sagarmatha TV
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको घोषणा, ६ बुंदे सहमति
काठमाडौ, १८ असोज । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नया शक्ति नेपालबीच आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने र लगतै एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनेसहित ६ बुदे सहमति भएको छ ।
तीन पार्टीबीच आगामी चुनाव लगतै एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने सहमति भएको हो । यसका लागि ८ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजना समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा एमालेबाट चार, माओवादीबाट तीन र नयाँ शक्तिबाट एक सदस्य रहनेछन् । पार्टी एकीकरणको संयोजन समितिको प्रमुख नेतामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रहनेछन् । पार्टी एकताको खाका र कार्ययोजना बनाउनुका साथै सहमति हुन बाँकी विषयहरु टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएको यो समितिले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नेछ । साथै पार्टीको नीति कार्यक्रम घोषणापत्र बनाउन दस्ताबेज मस्यौदा समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नया“ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । तीन दलले अन्य कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी पार्टीलाई एकीकरणमा आउन आह्वान पनि गरेका छन् । आज भएको सहमति घोषणामा तीनओटै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सहमति कुनै पार्टी विशेषप्रति लक्ष्ँित नभएको स्पष्ट पारेका छन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको पूर्वसंध्यामा एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसको घोषणासभाको तयारी हु“दै गर्दा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति थपिएको छ ।
तीन दलले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति पनि गरेका छन् । साथै चुनावमा सहकार्य गर्न लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिलाई आह्वान गरेका छन् ।